भुकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि रसुवाको खाल्टे गाउँको पुनर्निर्माण अझैँ अनिश्चित ! « News24 : Premium News Channel
भुकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि रसुवाको खाल्टे गाउँको पुनर्निर्माण अझैँ अनिश्चित !
रसुवा । कार्यक्रममा केही अंक अघि रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका खाल्टेबाट हाम्रा दर्शकले लाईभ कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिरकणले भुकम्प गएको चौथो बर्ष बित्नै लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरुप बस्ती नबनाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनको गुनासोपछि हाम्रो टिम रसुवाको खाल्टे पुग्यौ । यो बस्तीमा रहेका करिब २ सय घर अझै टहरा र छाप्रो मै रहेछन् ।
भुकम्पपछि पुनर्निर्माण प्रधिकरणका सिईओ र धुर्मुस सुन्तली हेलिकप्टरमै त्यहाँ पुगेर बस्ती बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पुनर्निर्माणको टोलीको स्वागतका लागि खादा किन्न पैसा उठाएको अझै सम्झिन्छन् उनीहरु ।
भुकम्प गएको ४ बर्ष बित्न लाग्दा पनि स्थायी बसोवासका लागि घरको शिलान्याससम्म नहुनु विडम्वना हो । हामीले यस विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिरकण रसुवाका प्रमुखलाई सोध्यौ । तर अहिले आएर ती अधिकारीनै आफूहरुबाट गल्ती भएको बताउँछन् ।
भुकम्प पीडितको आफ्नो जग्गा नभएका कारण जग्गा किन्न प्राधिरकणले दुई लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । तर भुकम्प पीडित दुई लाखमा घरेडी नपाउने भन्दै सरकारलेनै बसोवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउछन् ।
भुकम्प पीडितहरु आफ्नो पुरानो गाउमा जाने अवस्था छैन् । भौगोलिक हिसाबले अझैँ त्यस ठाउँमा बस्ती बनाउन मिल्ने अवस्था छैन् । तर पनि बस्ती बनाउने उद्घोष गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गल्ती भयो भन्दै उम्किने अवस्था छैन ।